ကူညိ ကြပါဦးနော် — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited October 2008 in မိတ်ဆက်
ကျွန်တော်က ကျော်ကျော် ပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း MZ member အသစ်ပါ
ကျွန်တော်က အင်တာနက်ကို စသုံးတာလဲ ၃ လ လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
သိပ်လည်းမသုံးတတ်သေးပါဘူး ခင်ဗျာ နောက်ပြီး c#,c##,java တို့ကိုလဲ စိတ်၀င်စားပါတယ်
online ကနေ လေ့လာချင်ရင်ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရမလဲခင်ဗျာ
ကျွန်တော့ကို MZ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ myanmarmen ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကြိုဆိုပါတယ်.. ပရိုဂရမ်းမင်းအခြေခံကို လေ့လာပါ.. ပြီးရင် ဘယ် language ပြောင်းပြောင်းအေးဆေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်.. google နည်းနည်းလုပ်ကြည့်လိုက်တာ ဒီလင့်ခ်လေးတွေ့ပါတယ်.. C# စလေ့လာမယ်ဆိုသွားကြည့်လိုက်ပါ.. http://www.programmersheaven.com/2/Les_CSharp_0
Dear Kyaw Kyaw,
Welcome to MZ. If you would like to learn programming, then learn from C language. The free online tutorial site is
If you wanna beaweb developer then visit http://www.w3schools.com/
If you are not home user of Internet then go to British Council Library and American Resources Center. These libraries have many programming books and you can learn from there. If you are home user, then take online tutorial.
The most important is that you need to improve your English.
ကျနော်ကတော့ Computer language တွေကို မသိဘူးဗျ
ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေပဲလေ...... ရှာဖွေရင်တော့ တွေ့မှာပါ
MZ ၀ိုင်းတော်သားများကလည်း အားပါးတရ ကူညီမှာပါ ...
exiter ရေ အခုလို ကြိုဆို တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
dos_x86 wrote: »
dos_x86 ရေ link လေးတွေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မင်္ဂလာပါ ကိုကျော်ကျော် ရေ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
online မှာလေ့လာချင်ရင်တော့ အနော်တော့
C# ဆိုရင် C# Programming Guide
ကို MK ရေ link လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
kyawkyaw7 wrote: »
ကိုကျော်ကျော်ရေ online မှာ လေ့လာမယ်ဆိုရင် mystery zillion က Online education မှာလည်း သွားပြီးတော့ တက်သင့်တယ် ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့မှာသင်တာတွေက အခြေခံကျတယ်။ ကျွန်တော်တောင် အဲ့မှာတက်နေရတယ်ဗျ။